Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Mampahatsiahy ny mpihinana fofona: Mampidi-doza ny homamiadana
Ny Odor-Eaters, zarain'ny Blistex Corp., dia mampahatsiahy an-tsitrapo ny vokatra famafazana Odor-Eaters maromaro novokarina teo anelanelan'ny datin'ny 1 martsa 2020 sy 22 aogositra 2021, ho an'ny mpanjifa. Ny fitiliana anatiny dia nahitana fandotoana benzène ambany tamin'ireo vokatra aerosol ireo.
Odor-Eaters® Spray Powder dia misy fiantraikany amin'ity fampahatsiahivana an-tsitrapo ity, indrindra:
UPC Mombamomba ny vokatra Lot Daty farany
041388004310 POWODORINA FOTOTRA MPIHINANA MAIFO (113 g) LOTD20C04 EXP 03/2022
041388004310 POWODORINA FOTOTRA MPIHINANA MAIFO (113 g) LOTD20K13 EXP 10/2022
041388004310 POWODORINA FOTOTRA MPIHINANA MAIFO (113 g) LOTD21H03 EXP 08/2023
Ny Benzene dia sokajiana ho carcinogène olombelona, ​​zavatra mety hiteraka homamiadana arakaraka ny haavony sy ny halehiben'ny fihanaky ny aretina. Ny olombelona eran'izao tontolo izao dia mipoitra isan'andro tsy tapaka amin'ny benzene avy amin'ny loharano maro, na ao an-trano na any ivelany. Ny Benzene dia hita manerana ny tontolo iainana. Ny fihanaky ny benzene dia mety hitranga amin'ny alàlan'ny fofonaina, am-bava ary amin'ny hoditra.
Ny vokatra famafazana Odor-Eaters izay naverina an-tsitrapo dia fonosina anaty kapoaka aerosol. Nozaraina teto Canada tamin'ny alalan'ny mpivarotra isan-karazany ny vokatra. Ny mpanjifa dia tokony hampitsahatra ny fampiasana ireo vokatra famafazana Odor-Eaters manokana ireo ary hanary azy ireo araka ny tokony ho izy. Azafady, jereo ny sary etsy ambany mba hahazoana torolàlana momba ny toerana hahitana ny antsipirian'ny kaody lot amin'ny kapoaka.
Manomboka amin'ny 18 Novambra 2021 amin'ny 8 ora maraina (EST), ny mpanjifa dia afaka miditra amin'ny odoreatersrecall2021.com mba hangataka famerenam-bokatra sy fampahalalana fanampiny. Ny mpanjifa koa dia afaka mifandray amin'ny 1-855-544-4821 amin'ny fanontaniana alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 8:00 maraina-5 hariva (EST). Ny Odor-Eaters koa dia mampandre ny mpivarotra ao aminy amin'ny alalan'ny taratasy ary mikarakara ny fampodiana ireo vokatra famafazana an-tsitrapo rehetra. Ny mpanjifa dia tokony hifandray amin'ny dokoterany na ny mpitsabo azy raha sendra olana mety mifandray amin'ny fampiasana ireo vokatra fanariana ireo.
Ny fanehoan-kevitra ratsy na olana momba ny kalitaon'ny fampiasana ireo vokatra be dia be ireo dia azo taterina amin'ny programa MedEffect Adverse Reaction Reporting an'ny Health Canada na an-tserasera, mailaka mahazatra na fax.